Tag: fitsikilovana sosialy | Martech Zone
Tag: fitsikilovana sosialy
Ahoana no fomba hanombohako amin'ny media sosialy? Ity dia fanontaniana iray izay tohizako hatrany rehefa miresaka momba ny fiantraikan'ny media sosialy amin'ny ezaky ny varotra orinasa aho. Voalohany, andao hodinihintsika ny antony itiavan'ny orinasanao ho mavitrika amin'ny media sosialy. Antony mahatonga ny orinasa mampiasa marketing media sosialy Ity misy horonantsary manazava tsara momba ny fomba 7 ahafahan'ny marketing amin'ny media sosialy mitondra ny valin'ny orinasa. Ahoana no hanombohana amin'ny fiaraha-monina
Asabotsy, Aogositra 29, 2015 Alahady, Aogositra 30, 2015 Douglas Karr
Ny orinasa dia manandrana misambotra data momba ny prospect sy ny mpanjifa hatrany mba hahitana sy hisarihana fitarihana, ary avy eo hitazona sy hampisondrotra ny mpanjifa azony. Misy teknolojia an-taonina any hanandrana haka an'ity data ity. Ny sasany amin'ireo loharano dia tsy marina ary ny sasany lany andro. Ratsy loatra fa tsy nisy loharanom-baovao izay nohavaozina tsy an-kanavaka araka ny marina sy matetika. Misy! Miala tsy tapaka sy miverimberina ny olona
Tsy hita tamin'ny ankamaroan'ny fikarohana hitako an-tserasera fa izy no mombamomba ireo antontan'isa nomena. Hitako fa diso ny statistika (matetika fanahy iniana) ary miorina amin'ny varavarankely misy toe-javatra mety na tranga tsy mahazatra. Na izany aza, zaraina na ahoana na ahoana. Raha ny zava-misy dia matoky aho fa saika misy mpanelanelana milaza aminao fa manana ny tamberim-bidy tsara indrindra izy ireo. Tsy afaka ny ho tonga mahay indrindra ny tsirairay… ary ny tena zava-dehibe, ny tsara indrindra dia ny mizaka tena.
nBA Fahatakarana: Fampahalalana momba ny asa sosialy azo ampiharina
Zoma, Aprily 12, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
newBrandAnalytics dia manolotra vahaolana ara-tsosialy ho an'ny trano fisakafoanana, fandraisam-bahiny, governemanta ary indostrian'ny varotra. Mamaky sy mamakafaka ny valin'ny fanehoan-kevitra amin'ny media sosialy izy ireo ary mandika izany amin'ny fomba fiasa miasa eo amin'ny sehatra eo an-toerana, isam-paritra ary marika ho an'ny mpanjifany. Ity misy topy topitra iray momba ny fampiasana ny nBA ao amin'ny Indostrian'ny trano fisakafoanana: manangona sy mandrindra fanehoankevitra media sosialy tsy voarindra momba ny orinasanao eo amin'ny eo an-toerana, isam-paritra ary marika ny nBA Insight mba hahafahanao